३० हजार तिर्न नसक्दा श्रीमानको लास बुझ्न पाइनन् यी महिलाले, खै, कहाँ छ, मानवीय संवेदना, ? (भिडियो सहित) - IAUA
३० हजार तिर्न नसक्दा श्रीमानको लास बुझ्न पाइनन् यी महिलाले, खै, कहाँ छ, मानवीय संवेदना, ? (भिडियो सहित)
ramkrishna September 18, 2017	? (भिडियो सहित)३० हजार तिर्न नसक्दा श्रीमानको लास बुझ्न पाइनन् यी महिलालेकहाँ छखैमानवीय संवेदना
खै, कहाँ छ संवेदना, मानवीयता ? त्रिवि शिक्षण असपताल महाराजगन्जमा भेटिएकी यी महिलाको घर चितवन हो । शिक्षण असपतालमै उनका श्रीमान बितेको शनिवार १६ दिन भईसक्यो । तर, उनले अस्पातलको मुर्दाघरमा रहेको आफ्नो श्रीमान को शव निकाल्न सकेकी छैनन । श्रीमान को मृत्‍युपस्चात शवलाई मुर्दाघरमा राखेको र त्यहाँ लाग्ने ३० हजार रकम तिर्न नसक्दा उक्त श्व निकाल्न नसकेको उनी बताउँछिन । अहिले उनी शव निकाल्न सहयोग जुटाउँदै हिंडेको बताउँछिन् । एक छोरी पनि मोतीबिन्दु भएर आँखा देख्न नसक्ने भन्दै उनले हाम्रा सामु यसरी बेदना पोखिन । तर, अस्पातलका कर्मचारी उनका बारे यसो भन्छन –‘हो सव मुर्दाघर मै छ,अस्पातलको दैनिक लाग्ने भाडा रकम बढेकै छ ।’ तर यतिका दिन बितीसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय अझै जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ । खै, कसले लिने यस्ता घटनामा अग्रसरता ?
Previous Previous post: दाँतदेखि पेट दुखाईको उपचारसम्म घरमै पाइने यी मसलाको यस्तो उपयोग
Next Next post: श्रीमान् फर्कने आशले कुर्दाकुर्दै जवानी रित्तियो